Wzọ 9 You Pụrụ Boozụlite Sistemụ Ahụ Gị Mgbe Ọrịa Na - aga - Mmezi Ahụ Ike
Mbido » blog » 9 Youzọ Can Pụrụ Isi bulie Sistemụ Ahụ Gị N'oge Ọrịa
Enweela ọtụtụ akụkọ na-emegiderịta onwe ha na-aga gburugburu banyere COVID-19. Ka o sina dị, nghọta dị nkenke bụ na ọrịa a na-eku ume na-akpalite ọnwụ na ndị nwere usoro ahụ ike na-esighi ike ma ọ bụ ndị nwere nsogbu ahụike ndị ọzọ.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ nde mmadụ nwere mmasị na mberede na ahụike ha ma chọọ ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ọ bụrụ na ị nabata usoro ndị achọrọ, ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịkwalite nchebe ahụ gị na obere oge.
Lee ụzọ iteghete gosiri gị ka ị ga - esi bulie sistemu mgbochi gị n'oge ọrịa na - efe efe! Ndụmọdụ 9 ndị a na - akwado ọgụ ga - enyere gị aka n'akụkụ ọrịa a niile.
Anyị niile maara na nke a bụ vitamin a na-atụkarị aro maka ịlụ ọgụ na izere influenza. Agbanyeghị ahụ mmadụ enweghi ike ịchekwa vitamin C. Yabụ, ị ga -ewe ọgwụ vitamin C kwa ụbọchị. Ọ nwere ike ịbụ mbadamba nkume, gummies, ma ọ bụ ụdị na-agbaze na mmiri dịka Emergen-C.
N'ime oge ndị a dị egwu, ị ka mma ị nweta ọgwụ gị kwa ụbọchị site na mgbakwunye, kama ịnwa imeju mkpa gị kwa ụbọchị site na ị juiceụ ihe ọ orangeụ orangeụ oroma ma ọ bụ ịta mmiri na broccoli.
Otu ihe nchịkwa na-elegharakarị anya, zinc nwere ọtụtụ uru. Ahụ gị enweghị ike ịmepụta ya. Ikwesiri iri ya n’iile.
Nwere ike ịzụta mgbakwunye zinc site na ụlọ ahịa ahụike na ntanetị ma ọ bụ na-adịghị n'ịntanetị. Naanị otu pasent kwa ụbọchị ka achọrọ iji nọgide na-enwe ezigbo ahụike.
Zinc ga - enyere gị aka ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, belata nsị, mee ka ọgwụgwọ dị ngwa ma belata ihe egwu nke ọrịa metụtara afọ. Nke a dị mkpa ugbu a n'ihi na ndị agadi nwere ike ị nweta COVID-19.
3. Nkọwapụta ihe
Probiotics ga-eme ka ahụ ike gị dịkwuo mma ma n'ihi ya, nkwụsi ike gị ga-adịwanye ike. Ọ na - enyere aka n'ịmepụta ihe ndị na - alụso ọrịa ọgụ ma na - ebelata ọtụtụ nsogbu ahụike iku ume. N’ezie ị chọrọ ịdị na-eri probiotics.
Yogurt, miso, kombucha, kimchi na tempeh bụ ọgwụ ndị magburu onwe ha iji mejupụta nri gị.
4. Garlic Oil Mmeju
Garlic bụ ihe na-enyere mmadụ aka ịna-alụso ọrịa ọgụ, ebe niile ọ gụnyere nwere ihe ndị e ji agwọ ọrịa. Garlic bụ otu n'ime nri kachasị dị mma nke ụwa ma ọ na-arụ ọrụ ebube n'ịgbanahụ ọrịa na ime ka ahụike zuru oke.
Nwere ike ịnweta ụfọdụ n'ụlọ ahịa ahụike wee were Capsule ma ọ bụ ụbọchị 2 ụbọchị. Ọ bụ ezie na ị na-eri galik dị mma, ihe mgbakwunye dị mfe ma dị mma karị ebe ọ bụ na ị ga-enwerịrị ọtụtụ galik iji nweta otu ọnụego allicin nke ị nwetara site na capsule.
Na-anwa igbochi COVID-19, ọ bụghị Dracula. Ọ dị mfe ilo pill ga-eme.
Ikewapụ onwe ya apụtaghị ezumike. Mmega ahụ ga - enyere gị aka ịlụso ọrịa ọgụ site na ime ka mgbasa ọbara gị na - aga ma meziwanye ike na ntachi obi gị.
Ọbụlagodi na ịnọ n'ụlọ, enwere mgbatị ụlọ ị ga-eme iji mega ahụ kwa ụbọchị. Gaa n'ihu ma nwaa mmemme mgbatị ụlọ dịka P90X ma ọ bụ Insanity Max. Ọ ga-eju gị anya etu mmega ahụ ndị a siri sie ike. Mee mgbatị gị site na nchekwa na nkasi obi nke ụlọ nke gị! Ọkụ calories na mgbachapụ ndị endorphins na Beachbody on Demand!
Rịba ama na mmega ahụ gabigara ókè nwere ike belata ọgụ gị. Yabụ, na-eme mgbatị ahụ kwa ụbọchị mana ịgabigala ya. Na coronavirus na agaghari, ichoghi usoro na adighi ike.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ atụmatụ mgbatị ahụ dị oke egwu maka ụmụ nwanyị, anyị na-akwado Danette May Ewepụghị Afọ Fast DVD nke ọ na-enye n'efu na obere oge naanị. Ihe niile ị ga-akwụ bụ obere ego maka mbufe.
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ana m akwado ịlele Zero Physique maka mgbatị ahụ na-ewuli akwara ị nwere ike ime n'ụlọ. Atụmatụ mgbatị ahụ nke ụlọ a ga-enyere gị aka mgbatị ahụ na-enweghị mgbatị ahụ nke pụtara na ị nwere ike nweta ọdịdị, felata ma na-esiwanye ike n'oge mgbochi Coronavirus.
Na-emega ahụ́ ọsụsọ ma na-agbapụta obi gị, mana arụla ọrụ kwa ụbọchị ruo mgbe ike gwụrụ gị ma na-atụ ụtụ isi gị nke na-enweghị isi.
6. Ihi ụra
Bilie ụra awa 7 ruo 8 kwa ụbọchị. Ahụ zuru ike zuru oke na ahụ siri ike karịa.
7. Ebufu ibu
Mgbe ị na-awụfu ego buru ibu, ahụike gị ga-aka mma. Shortkọ nri niile dị n’ụlọ ahịa na-ere nri, ugbu a bụ oge dị mma dị ka mmadụ ọ bụla ga-esi buo ibu oge iji belata ibu.
Na-eche ihe ebu ọnụ oge niile pụtara? Inwe oge na-ebu ọnụ abụghị ihe ị na-eri… ọ bụ ihe gbasara mgbe ị ga-eri nri n'ụbọchị. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi usoro iri nri nke na-agbata n'oge oge ibu ọnụ na iri nri. O kwughi ụdị nri ị ga-eri kama kama mgbe ị kwesịrị iri ha. N'akụkụ a, ọ bụghị nri n'echiche nkịtị mana akọwapụtara ya nke ọma dị ka usoro iri nri.
Lean Fast RFL bụ nnukwu mmemme ị na-ebu ọnụ nke izu iri na abụọ nke ị nwere ike ịmalite site na ntụsara ahụ nke ụlọ gị. Ọ na-abịa na ntuziaka zuru ezu, ihe mgbako, mmemme ọzụzụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke na-egosi gị kpọmkwem ihe ị ga-eme iji tụfuo abụba anụ ahụ, nọgide na-enwe ahụ ike, ma wuo ahụ siri ike, na-eme egwuregwu.
Usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ga-enweta nkwalite na ahụike gị ga-akawanye mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-agbaso atụmatụ iri nri kwesịrị ekwesị ma mee ka ụzọ gị si dị arọ gị. Ọ bụrụ na ị na-eri salad (nke anyị na-akwado) dịka akụkụ nke atụmatụ ịbelata ibu gị, anyị na-akwado ka ị lelee ya Nri nri metabolic nke gụnyere ihe mgbakwasa salad kachasị maka mbelata ibu.
8. akingakingụ ọgwụ ike
Kwụsị ise siga. Belata mmanya ị na-a intakeụ. Belata ihe oriri ị na-a aimụ na shuga ma chọọ ịkwụsị àgwà ọjọọ ọ bụla ị nwere.
Ọ ga-abụ ihe siri ike… mana nke ahụ ga-atụ anya. Nabata nsogbu ahụ ma merie ya. Ozugbo ewepu agwa ndị a na-adịghị mma, ị ga-adị gị ka ọ bụ ọhụụ ọhụụ.
9. Hydị ọcha nke otu onye
Hygidị ọcha dị ọcha dịka ịsa aka gị mgbe niile, ịghara imetụ ihu gị aka mgbe ị nọ n'èzí na ịsa ahụ oge ị laruru n'ụlọ bụcha usoro dị mkpa nke ga - eme ka ahụ gị na-alụ ọgụ.
Mgbe ị si n'èzí si n'ụlọ, Anọdụla n'elu n'ihe ndina ma ọ bụ n'ihe ndina. Don'tghọtaghị ihe nje dị na uwe gị… na ịkwesighi ịgbasa ha na ngwaahịa ndị ọzọ dị n'ụlọ gị. Tinye uwe gị na igwe ịsa ahụ ozugbo, saa ahụ, wee yikwasị uwe dị ọcha.
Site na ịnabata ndụmọdụ 9 ndị a banyere otu ị ga - esi bulie sistemu mgbochi gị n'oge ọrịa na - efe efe, ị ga - emeziwanye ahụ ike gị ma nye onwe gị ohere ịlụ ọgụ megide COVID-19 ma ọ bụ ọrịa ọ bụla na - anwa idozi ahụ gị.